ကိုယျပူကွီးလို့ 'တကျ'သှား တဲ့ ကလေးတှေ အကွောငျး? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
?ကိုယျပူကွီးလို့ ‘တကျ’သှား တဲ့ ကလေးတှေ အကွောငျး?
မိဘတိုငျး အကွောကျဆုံးနဲ့ စိတျအညဈဆုံးအရာက ခဈြမဝတဲ့ ကိုယျ့ရငျသှေးလေးတှေ နမေကောငျးဖွဈမှာကိုပါပဲ။အဖြားအနာ ဆိုတာကလညျး ပနျးကလေးတှလေို နုနယျတဲ့ ကလေးလေးတှအေတှကျ ငယျသူငယျခငျြးတှလေိုပဲ တတှဲတှဲ မဟုတျလား။
“ဆရာ..ကလေးက ကိုယျပူကွီးရငျ ‘တကျ’သှားတတျတယျ” လို့ ကလေးကိုယျပူလို့ ဆေးခနျးလာပွတဲ့ မိဘတျောတျောမြားမြား စိုးရိမျတကွီးပွောလရှေိ့တယျ။
တကယျတော့ “ကိုယျပူကွီးလို့ တကျသှားတဲ့ Frbrile Convulsion” ဆိုတဲ့ ပွဿနာက ဆရာဝနျတဈယောကျအတှကျ ကလေးကိုထိခိုကျနိုငျတဲ့ စိုးရိမျစရာ ရောဂါကွီးတဈခုမဟုတျပမေဲ့ မိဘတှအေတှကျကတော့ ကမ်ဘာပကျြသလို ခံစားရတတျတယျ။ ကလေးဘယျအရှယျပဲရောကျရောကျ ကိုယျပူလာတိုငျး တကျမြားသှားဦးမှာလားပဲ စိတျပူနကွေတတျတယျ။
? Febrile convulsion ဆိုတာဘာလဲ ??
ကိုယျပူကွီးပွီး တကျသှားတဲ့ အခွအေနတေဈခု ဖွဈပါတယျ။ အကွာကွီးကိုယျပူတကျနရောက ဖွဈတာမြိုးထကျ ရုတျတရကျ အပူခြိနျ မွနျမွနျထိုးတကျသှားတဲ့ အခါမြိုးမှာဖွဈတတျပါတယျ။ ပုံမှနျဖှံ့ဖွိုးနတေဲ့ကလေးတှမှော အသကျ ၆လ ကနေ ၆နှဈအရှယျလောကျအထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ကလေးအယောကျ ၃၀ မှာ တဈယောကျနှုနျးလောကျအထိ ဖွဈနိုငျခရြှေိပါတယျ။
? ဘာလို့ အန်တရာယျမရှိတာလဲ ??
ဒီရိုးရိုးကိုယျပူကွီးလို့ဖွဈတဲ့ ‘အတကျ’ကွောငျ့ ဦးနှောကျ ပကျြစီးထိခိုကျမှု မဖွဈစနေိုငျပါဘူး။ ဝကျရူးပွနျရောဂါလို့ ချေါတဲ့ Epilepsy ဖွဈလာနိုငျခလြေညျး မရှိသလောကျနညျးတဲ့အတှကျ ဆကျစပျမှု မရှိဘူးလို့လညျး ဆိုနိုငျပါတယျ။
? ဘယျလို’တကျ’လဲ ??
ကိုယျပူရုတျတရကျ ကွီးလာရာက သတိလဈသှားတတျပါတယျ။ တဈကိုယျလုံးကွှကျသားတှေ တောငျ့တငျး..ကုတျကှေး.. ကော့လနျ သှားတတျပါတယျ။
မကျြဖွူလနျသလိုမြိုး မကျြလုံးတှေ အပျေါဘကျကို လညျသှားတတျပါတယျ။ မကျြနှာရဲနတေတျသလို ပွာနှမျးနှမျးလညျး ဖွဈနတေတျပါတယျ။
မိနဈအနညျးငယျကနေ မိနဈနှဈဆယျထကျမပိုဘဲ ‘တကျ’နိုငျပါတယျ။
တကျပွီးသတိပွနျလညျလာတဲ့ အခါမှာတော့ မှိနျးသှားတတျသလို နညျးနညျးလညျး မရှငျမပနြဲ့ ဂြီကနြတေတျတယျ။ တခါတလမှော ကလေးဖြားနမှေနျး သတိမထားမိခငျမှာပဲ အပူရုတျတရကျထိုးတကျပွီး ‘တကျ’သှားတာမြိုးလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ ၂၄နာရီအတှငျးမှာ တဈကွိမျထကျတော့ ပိုတကျလမေ့ရှိပါဘူး။
? ဘယျလိုတကျရငျ သတိထားရမလဲ ??
– ခဏခဏ တကျခဲ့ရငျ
– ခန်ဓာကိုယျတဈဖကျတညျးကပဲ တကျရငျ
– အတကျ ရပျသှားပမေဲ့ သတိကောငျးကောငျးမလညျလာလြှငျ
– ခွေ လကျ တဈဖကျဖကျ မသနျသလို ဖွဈကနျြခဲ့ရငျ
? ကလေး’တကျ’သှားရငျ ဘာလုပျရမလဲ ??
အကွောကျမလှနျပါနဲ့။ စိတျအေးအေးထားပါ။ ‘အတငျးဆှဲ..ဖကျ..ခြုပျ..ပါးစပျထဲ ဟိုဟာ ဒီဟာထညျ့..လကျထညျ့..ဆေးတိုကျ.. လကျတှေ ခွတှေေ အတငျး ဆှဲဆနျ့..ခွမေခြိုး..’စတဲ့ စိတျပူလှနျပွီး လုပျမိတဲ့အပွုအမူတှကေ ကလေးအတှကျ အန်တရာယျပဲ ပိုဖွဈစပေါတယျ။
ပါးစပျထဲ ထညျ့တဲ့ အရာတှေ.. ဆေးတှေ..ရတှေေ ကွောငျ့ အသကျရှူလမျးကွောငျးထဲ ဝငျပွီး သီးသှားတတျပါတယျ။ ခွခြေောငျး လကျခြောငျးတှေ အတငျးနှိပျနယျ ခြိုးခွေ ရာက ကြိုးသှားတတျပါတယျ။ အတငျးဆှဲဖကျ ခြုပျ လူတှေ ဝိုငျးအုံကွညျ့တာကွောငျ့လညျး ကလေးအသကျကောငျးကောငျး မရှူနိုငျဘဲ ပိုဒုက်ခရောကျသှားတတျပါတယျ။ ကိုယျပူကသြှားအောငျဆိုပွီး တကျနတေဲ့ကလေးကို ရခြေိုးဇလုံထဲ မထညျ့ပါနဲ့။
ကလေးကို တဈဖကျဖကျကို ဘေးစောငျးထားပေးထားပါ။ ပွုတျကနြိုငျတဲ့ နရောကနေ ရှထေ့ားပေးပါ။ အခငျးခပျပြော့ပြော့ပျေါထားထားပါ။
စ ‘တကျ’ တဲ့ အခြိနျနဲ့ ပွီးဆုံးခြိနျကို မှတျထားပါ။ ဘယျလိုပုံစံတှဖွေဈသှားတယျ ဘယျလိုတကျတယျဆိုတာ သခြောကွညျ့ပွီး မှတျထားပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဗီဒီယို ရိုကျထားပါ။ ဆရာဝနျ အတှကျ အမြားကွီး အထောကျအကူဖွဈပွီး ကလေးအတှကျ တကယျ အကြိုးရှိပါလိမျ့မယျ။
? ကလေးကိုယျပူလာရငျ ဘာလုပျမလဲ ??
-100° F အထကျ အပူခြိနျတကျလာရငျ Paracetamol(ပါရာစီတမောလျ) ဆေးရညျကို အသကျအရှယျအလိုကျ အညှနျးအတိုငျး တိုကျလို့ရပါတယျ။
– ရပေတျတိုကျလို့ရပမေဲ့ ခြိုငျးကွားပေါငျကွားမှာ အဝတျအေးအေးလေး ကပျထားပေးတာက ကိုယျပူပိုကစြပေါတယျ။
တကျနစေဉျမှာတော့ ဘာဆေးမှ မတိုကျရပါ။
အတကျရပျသှားလြှငျ သှားခငျြး ဆရာဝနျ မွနျမွနျပွပါ။
ကလေးငယျတိုငျး အဖြားအနာကငျးလို့ မိဘတိုငျး အပူအပငျလြော့ပါစေ..။
?ကိုယ်ပူကြီးလို့ ‘တက်’သွား တဲ့ ကလေးတွေ အကြောင်း?
မိဘတိုင်း အကြောက်ဆုံးနဲ့ စိတ်အညစ်ဆုံးအရာက ချစ်မဝတဲ့ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးတွေ နေမကောင်းဖြစ်မှာကိုပါပဲ။အဖျားအနာ ဆိုတာကလည်း ပန်းကလေးတွေလို နုနယ်တဲ့ ကလေးလေးတွေအတွက် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ တတွဲတွဲ မဟုတ်လား။
“ဆရာ..ကလေးက ကိုယ်ပူကြီးရင် ‘တက်’သွားတတ်တယ်” လို့ ကလေးကိုယ်ပူလို့ ဆေးခန်းလာပြတဲ့ မိဘတော်တော်များများ စိုးရိမ်တကြီးပြောလေ့ရှိတယ်။
တကယ်တော့ “ကိုယ်ပူကြီးလို့ တက်သွားတဲ့ Frbrile Convulsion” ဆိုတဲ့ ပြဿနာက ဆရာဝန်တစ်ယောက်အတွက် ကလေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ စိုးရိမ်စရာ ရောဂါကြီးတစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့ မိဘတွေအတွက်ကတော့ ကမ္ဘာပျက်သလို ခံစားရတတ်တယ်။ ကလေးဘယ်အရွယ်ပဲရောက်ရောက် ကိုယ်ပူလာတိုင်း တက်များသွားဦးမှာလားပဲ စိတ်ပူနေကြတတ်တယ်။
ကိုယ်ပူကြီးပြီး တက်သွားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အကြာကြီးကိုယ်ပူတက်နေရာက ဖြစ်တာမျိုးထက် ရုတ်တရက် အပူချိန် မြန်မြန်ထိုးတက်သွားတဲ့ အခါမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ကလေးတွေမှာ အသက် ၆လ ကနေ ၆နှစ်အရွယ်လောက်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးအယောက် ၃၀ မှာ တစ်ယောက်နှုန်းလောက်အထိ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
? ဘာလို့ အန္တရာယ်မရှိတာလဲ ??
ဒီရိုးရိုးကိုယ်ပူကြီးလို့ဖြစ်တဲ့ ‘အတက်’ကြောင့် ဦးနှောက် ပျက်စီးထိခိုက်မှု မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါလို့ ခေါ်တဲ့ Epilepsy ဖြစ်လာနိုင်ချေလည်း မရှိသလောက်နည်းတဲ့အတွက် ဆက်စပ်မှု မရှိဘူးလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
? ဘယ်လို’တက်’လဲ ??
ကိုယ်ပူရုတ်တရက် ကြီးလာရာက သတိလစ်သွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးကြွက်သားတွေ တောင့်တင်း..ကုတ်ကွေး.. ကော့လန် သွားတတ်ပါတယ်။
မျက်ဖြူလန်သလိုမျိုး မျက်လုံးတွေ အပေါ်ဘက်ကို လည်သွားတတ်ပါတယ်။ မျက်နှာရဲနေတတ်သလို ပြာနှမ်းနှမ်းလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်ကနေ မိနစ်နှစ်ဆယ်ထက်မပိုဘဲ ‘တက်’နိုင်ပါတယ်။
တက်ပြီးသတိပြန်လည်လာတဲ့ အခါမှာတော့ မှိန်းသွားတတ်သလို နည်းနည်းလည်း မရွှင်မပျနဲ့ ဂျီကျနေတတ်တယ်။ တခါတလေမှာ ကလေးဖျားနေမှန်း သတိမထားမိခင်မှာပဲ အပူရုတ်တရက်ထိုးတက်ပြီး ‘တက်’သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၂၄နာရီအတွင်းမှာ တစ်ကြိမ်ထက်တော့ ပိုတက်လေ့မရှိပါဘူး။
? ဘယ်လိုတက်ရင် သတိထားရမလဲ ??
– ခဏခဏ တက်ခဲ့ရင်
– ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖက်တည်းကပဲ တက်ရင်
– အတက် ရပ်သွားပေမဲ့ သတိကောင်းကောင်းမလည်လာလျှင်
– ခြေ လက် တစ်ဖက်ဖက် မသန်သလို ဖြစ်ကျန်ခဲ့ရင်
? ကလေး’တက်’သွားရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ??
အကြောက်မလွန်ပါနဲ့။ စိတ်အေးအေးထားပါ။ ‘အတင်းဆွဲ..ဖက်..ချုပ်..ပါးစပ်ထဲ ဟိုဟာ ဒီဟာထည့်..လက်ထည့်..ဆေးတိုက်.. လက်တွေ ခြေတွေ အတင်း ဆွဲဆန့်..ခြေမချိုး..’စတဲ့ စိတ်ပူလွန်ပြီး လုပ်မိတဲ့အပြုအမူတွေက ကလေးအတွက် အန္တရာယ်ပဲ ပိုဖြစ်စေပါတယ်။
ပါးစပ်ထဲ ထည့်တဲ့ အရာတွေ.. ဆေးတွေ..ရေတွေ ကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲ ဝင်ပြီး သီးသွားတတ်ပါတယ်။ ခြေချောင်း လက်ချောင်းတွေ အတင်းနှိပ်နယ် ချိုးခြေ ရာက ကျိုးသွားတတ်ပါတယ်။ အတင်းဆွဲဖက် ချုပ် လူတွေ ဝိုင်းအုံကြည့်တာကြောင့်လည်း ကလေးအသက်ကောင်းကောင်း မရှူနိုင်ဘဲ ပိုဒုက္ခရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပူကျသွားအောင်ဆိုပြီး တက်နေတဲ့ကလေးကို ရေချိုးဇလုံထဲ မထည့်ပါနဲ့။
ကလေးကို တစ်ဖက်ဖက်ကို ဘေးစောင်းထားပေးထားပါ။ ပြုတ်ကျနိုင်တဲ့ နေရာကနေ ရွှေ့ထားပေးပါ။ အခင်းခပ်ပျော့ပျော့ပေါ်ထားထားပါ။
စ ‘တက်’ တဲ့ အချိန်နဲ့ ပြီးဆုံးချိန်ကို မှတ်ထားပါ။ ဘယ်လိုပုံစံတွေဖြစ်သွားတယ် ဘယ်လိုတက်တယ်ဆိုတာ သေချာကြည့်ပြီး မှတ်ထားပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဗီဒီယို ရိုက်ထားပါ။ ဆရာဝန် အတွက် အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်ပြီး ကလေးအတွက် တကယ် အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
? ကလေးကိုယ်ပူလာရင် ဘာလုပ်မလဲ ??
-100° F အထက် အပူချိန်တက်လာရင် Paracetamol(ပါရာစီတမောလ်) ဆေးရည်ကို အသက်အရွယ်အလိုက် အညွှန်းအတိုင်း တိုက်လို့ရပါတယ်။
– ရေပတ်တိုက်လို့ရပေမဲ့ ချိုင်းကြားပေါင်ကြားမှာ အဝတ်အေးအေးလေး ကပ်ထားပေးတာက ကိုယ်ပူပိုကျစေပါတယ်။
တက်နေစဉ်မှာတော့ ဘာဆေးမှ မတိုက်ရပါ။
အတက်ရပ်သွားလျှင် သွားချင်း ဆရာဝန် မြန်မြန်ပြပါ။
ကလေးငယ်တိုင်း အဖျားအနာကင်းလို့ မိဘတိုင်း အပူအပင်လျော့ပါစေ..။
နှနေပေူပူအောကျက ကိုကျနတေဲ့ ခေါငျးတှေ?